‘म नेपाल आइडल हो र ? होइन होला !’
भव्य तामझाम थियो । त्यो अधैर्य रात उनको मुटुको चाल अरु बढी तिब्र गतिमा धड्किइरहेको थियो । यस्तैमा उद्घोषकको आवाज उनको कानमा ठोक्कियो, ‘नेपाल आइडल पहिलो सिजनको विजेता बन्न सफल नाम हो…।’
मञ्चमा प्रतिस्पर्धीसँगै पंक्तिवद्ध बुद्ध लामाको कान थप चनाखो भयो । उनले मह जोडी अर्थात हरिवंश आचार्य र मदनकृष्ण श्रेष्ठको जोडदार आवाज सुने, ‘बुद्ध लामा ।’
त्यसपछि के भयो ? एक सन्नाटा । एक रोमाञ्चकता ।
त्यो रात उनको जीवन नै उमंगको पुञ्ज छरेर चम्किए झैं भयो ।
उमंगको ब्यारोमिटर तब एकाएक ओरालो लाग्यो, जब ‘जातीयता’को कारण देखाउँदै उनको गायकीमाथि औंला उठाइयो ।
त्यसपछि उनको झोँक बढाइदियो आयोजककै हर्कतले । आयोजकको हर्कत उनले सहन सकेनन्, फेसबुकमा लेखिदिए–
‘मैले पुरस्कारको पैसा पाइनँ । धाउँदाधाउँदा दिक्क भइसकें । पुरस्कारमा पाएको गाडीको कर पनि तिर्न सकेको छैन ।’
उनको यो तित्तता कसरी विष्फोट भयो ?
विजेता घोषित भएको आधा वर्ष बित्यो । घोषित पुरस्कार पाउने चालचुल छैन । पाएको गाडी पनि करको झमेलाले ‘कागलाई बेल पाक्यो…’ झैँ भइदियो । न नगद पुरस्कार हात लाग्छ, न कार चढ्ने मेलोमेसो मिल्छ ।
‘पुरस्कार नै सबैथोक होइन तर, सुरुवाती चरणमै यसरी झुलाउने भएपछि त्यसले आयोजक र समग्र कार्यक्रमकै गरिमामाथि संशय गर्ने ठाउँ रहन्छ’ बुद्ध लामालाई यस्तै लाग्यो । उनलाई झोंक चल्यो । स्टाटस लेखिदिए ।
बुद्धको भनाइमा न सम्झौताअनुसार एल्बम निकाल्ने तयारी नै भयो ।
७ महिनासम्म पनि केही खबर नआएपछि आफ्नो पुरस्कार र एल्बमबारे कुरा गर्न आयोजक कहाँ पुगे । नेपाल आइडलका प्रोडक्सन म्यानेजर र प्रबन्ध निर्देशकसँग उनले कुरा गरे । उनीहरुले छिट्टै गरिदिने आश्वासन दिए ।
तर त्यसको ४ महिनासम्म पनि उनलाई कुनै खबर आएन ।
बुद्धलाई गाडीको कर तिर्नपर्ने विषयमा केही पत्तो थिएन । तर उसले आकस्मिक लाभ कर तिर्नु पर्‍यो । भन्छन्, ‘यता १५ प्रतिशत, उता १० प्रतिशत, कता ९ प्रतिशत । सबै जोड्दा त झण्डै शत प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भयो । त्यो कुरा आयोजकसँग गर्दा ‘तिर्नुपर्‍यो नि’ भन्न थाल्नुभयो । त्यसैले पनि फेसबुकमा लेखे ।’
बल्लतल्ल नगद पुरस्कार पाए, त्यो पनि किस्तामा । १ वर्षसम्म ५० प्रतिशत मात्र पैसा पाए । डेढ वर्ष लगाएर पूरा पैसा दिइयो । तर गाडीको र पुरस्कार रकमको कर सबै मिलाउँदा उनको हातमा जम्मा २ लाख रुपैयाँ बचेको थियो ।
भन्छन्, ‘धेरै चोटी धाउँदाधाउँदा गरेर चेक पाएको थिएँ । त्यो चेक पनि ६ पटकसम्म बाउन्स भयो ।’ चोक बाउन्सबारे हल्ला गरेनन् । बुद्ध लामालाई यो स्थान दिने नेपाल आइडल नै भएकाले पनि खुलेर कुरा गरेनन् ।
गीत पनि धेरै संघर्ष गरेपछि बल्ल तयार भयो । नेपाल आइडलले बनाइदिएको ‘सानी’ बोलको गीतले बुद्धलाई सन्तुष्टि दिन सकेन ।
गीतको भिडियो राम्रो नबनाइदिएको गुनासो उनीसँग छ । भन्छन्, ‘उहाँहरुले कहिँ कतै सम्मान गरेको पाइनँ । यो हाम्रो आइडल हो भनेर माया पनि गर्नुभएको छैन । केवल आइडल बनायो, छाड्यो । यो त व्यापार जस्तै भइरहेको छ ।’
त्यसैले उनी बेलाबेला आफैंलाई प्रश्न गर्छन्, ‘म नेपाल आइडल हो र ? होइन होला ।’
जातीय भोटले जितेको आरोप
जब बुद्धले नेपाल आइडलको ताज पहिरिए, त्योसँगै विवाद उत्पन्न सुरु भयो, ‘बुद्धले त जातीय भोट पाएर आइडल बनेका हुन् ।’
यो कुराले बुद्धको मन छियाछिया बनायो । बेलाबेला उनलाई आफ्नो प्रतिभामाथि शंका लाग्न थालेको थियो, ‘म त गाउनै सक्दिन कि क्या हो !’ धेरैले समर्थकसँगै घृणा गर्नेहरु पनि उत्तिकै हुन्छन् भनेर सम्झाए । बुद्धले पनि यस कुरालाई राम्रोसँग बुझे र निश्कर्षमा पुगे, ‘यो सबै आरोप लगाउने मेरा हेटर्सहरु होलान् ।’
उनी जातीय भोटका कारण आइडल बनेको दाबीलाई ठाडै अस्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘म तामाङ समुदायमा पर्ने लामा हुँ । लामा त मेरो थर मात्र हो । यसले आइडल जितिन्छ भन्ने लाग्दैन । प्रतिभाले आइडल जितेको हुँ जस्तो लाग्छ ।’
प्रतिभा भएकै कारण आफू त्यो स्थानसम्म पुगेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘जब भोटिङ राउन्ड सुरु भएको थिएन, त्यो बेला लामा भएर त अगाडि पुगेको होइन होला । त्यो बेला त मेरो गायकीले मलाई सुरक्षित गरेको थियो होला ।’
आइडल जित्दाको त्यो खुसी
कतारमा नेपाल आइडल पहिलो सिजनको ग्राण्ड फिनाले हुँदै थियो । प्रतिष्पर्धामा थिए, तीन गायक बुद्ध लामा, निशान भट्टिराई र प्रताप दास ।
जसले बढी भोट ल्याउँछ त्यही विजेता बन्नेवाला थियो । कार्यक्रम सुरु भयो । सुरुवातमा केही प्रस्तुतिहरु गरियो ।
त्यसपछि अन्तिममा पालो आयो विजेता घोषणा गर्ने । विजेता घोषणा गर्न मह जोडी अर्थात् मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य कतार पुगेका थिए । दुई जनाको हातमा माइक पुग्यो र, विजेता हुनेको नाम पनि ।
सबैभन्दा पहिला तेस्रो हुनेको नाम लिइयो । हरिवंशले ओठ कमाउँदै नाम बोले, ‘प्रताप दास ।’
अब प्रथम हुने प्रतिस्पर्धामा दुई नाम बाँकी रह्यो । बुद्धको मुटुको वेग बढ्दै थियो । सोही समय हरिवंश बोले, ‘अब हामी प्रथम हुने गायकको नाम बोल्छौं ।’
मुटुको तेज झन् बढ्दै गयो । मदनकृष्ण र हरिवंश दुबै जनाले एकमुष्ट नाम बोल्ने भए र विजेताको नाम लेखिएको कार्ड खोले । दुबैले एउटै आवाजमा बोले, ‘पहिलो नेपाल आइडल हुनुभएको छ, बुद्ध लामा ।’
बुद्ध एकछिन खालीखाली भए । उनलाई पत्याउनै सकेनन् । आखाँबाट आशु झरे । बुद्ध भन्छन्, ‘आहा ! त्यो खुसीलाई मैले शब्दमा कसरी बोलु ?’
कार्यक्रम सकिएपछि बुद्धले पहिलो फोन आमालाई गरे । नेपालमा भएकी आफ्नी आमालाई खुसी हुँदै सुनाए, ‘आमा ! तिम्रो छोरोले जित्यो ।’ एकछिन त खुसीले आमाको बोली फुटेन । ‘मेरो छोरालाई आशिर्वाद छ’, आमाले बोलेको शब्द यहीँ मात्र थियो ।
एउटा साधारण केटो, कहिल्यै यति चर्चित हुन्छु भन्ने सोच्न सकेको थिएन । एकाएक पाएको यति धेरै मायाले उसको आँखा निकै रसाइरहेको थियो ।
एअरपोर्टमा आइपुग्दाको स्वागत, गृहनगर पोखरा पुग्दाको स्वागत । आहा ! साच्चिकै गज्जब माया बुद्धले पाएका थिए । उनी भन्छन्, ‘शो चलिरहँदा हामीलाई थाहा थिएन कि बाहिरी यति धेरै ब्रेज बनेको छ । अलि अलि सुनेको मात्र हो । एक्कासी त्यो भीडको माहोल मेरो लागि त सपना जस्तै लागेको थियो । आखाँबाट आशु नै झरे ।’
बुद्धलाई सानै उमेरदेखि संगीतमा गरेको मेहनत र संघर्षले बल्ल सार्थकता पाएको आभास भएको थियो । भन्छन्, ‘त्यो माया पाउन मलाई धेरै नै संघर्ष गरेको छु । तर नेपाल आइडलले राम्रो स्थान दियो र छिट्टै चिनायो ।’
‘आइडलमा आउने मनै थिएन’
नेपालमा नेपाल आइडल आउन लागेको कुरा बुद्धलाई संगीत सिकाइरहेका गुरु तीर्थराज पोखरेलले पत्तो पाए ।
उनले नै बुद्धलाई नेपाल आइडलको मञ्चसम्म हुत्याएका हुन् । बुद्धलाई नेपाल आइडलमा आउने मन नै थिएन । त्यो भन्दा अगाडि केही प्रतिस्पर्धामा भाग लिइसकेका बुद्धलाई गायन प्रतियोगिताबाट भरोसा उडिसकेको थियो । नेपाल आइडल पनि त्यहीँ होला भन्ने सोचेका थिए । पछि गुरुले उनलाई सम्झाएर आइडलको मञ्चसम्म पुर्‍याए ।
जब अडिसनमा गीत गाए, त्योसँगै उसको गायकी र चुलबुलेपनको निकै चर्चा भयो । अडिसनबाट नै बुद्ध धेरैको नजरमा परिसकेका थिए ।
सेलाएको हो बुद्धको चर्चा ?
भन्नेहरु भन्छन्, नेपाल आइडल भएपछि जुन चर्चा बुद्धको हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । अरु प्रतिस्पर्धीले संगीतिक क्षेत्रमा आफ्नो स्थान बनाउन थालिसकेका छन् तर, आइडल भएर पनि बुद्धले त्यो स्थान पाएका छैनन् ।
बुद्धका ६ वटा गीत रिलिज भएका छन् । तर सानीबाहेक अन्य गीत त्यति चलेन । तर, उनी यो कुरा मान्न तयार छैनन् । भन्छन्, ‘को कति चर्चित छ भन्ने त दर्शकको माझमा पुगेपछि थाहा हुन्छ । मलाई धेरैले माया गर्नुहुन्छ ।’
यो बीचमा आइडलबाट पनि सहयोग नभएको उनको गुनासो छ । ‘मलाई गीत अफर आएको हुन्छ । गरौँ नि नगरौँ भनेर सोध्छु । तर उहाँहरु कहिल्यै गर भन्नु भएन । न आफूले बनाइदिनु भयो । त्यसैले ग्याप भएको हो ।’
बुद्ध छिट्टै नयाँ गीत ‘आमा’ रिलिजको तयारीमा रहेका छन्, जुन गीत करिअरको महत्वपूर्ण भएको उनले सुनाए ।
प्रहरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्न खोज्ने ३ पक्राउ
अटोमेटिक पेस्तोलसहित एक युवक पक्राउ
दाङमा मोटरसाइकल दुर्घटना, २ जनाको मृत्यु
एनआरएन मलेसियाको अध्यक्षमा हरि प्रसाद भट्टराईको उमेद्वारी
माछा मार्दा डुबेर तामाङ बेपत्ता
शुभद्राको विद्युतीय शवदाहगृहमा अन्त्येष्टि
मोटरसाइकल र ट्रक ठोक्कियो, दुईजनाको मृत्यु
प्रिमियर लिगमा आर्सनलको दोस्रो जित
यो हो विश्वको सबैभन्दा धनी परिवार, हरेक घण्टा २८ करोड कमाउँछ
१५ केजी चाँदीसहित भारतीय नागरिक पक्राउ
संविधान संशोधनको सर्तमा दुई तिहाइ पुर्‍याउन सत्तामा गएका हौं : उपेन्द्र यादव
होस्टल एसोसिएसन नेतृत्वको लागि पाठक समुहको उमेद्वारी घोषणा
आरक्षण बचाऔं आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप, आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष बराम घाइते
वीरगञ्जमा ७० वर्षीय वृद्ध मृत फेला
राज्यसत्ताले कर्मचारीलाई परिचालन गर्न सकेनः पूर्वमुख्य सचिव कोइराला
One killed in Saptari road accident, five injured
Farmers receive Rs 875m grant from DoA
अलबिदा सुभद्रा अधिकारी…
गृहजिल्ला पुगेर सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘…तपाईको फुर्सद के छ, बेलुका भेटौँ न…’
Sports materials for prisoners in Rajbiraj
१२ दिनपछि कश्मीरमा ल्याण्डलाइन शुरु
फोटोसुटका लागि बोलाएर मोडल बलात्कार
कश्मीरमा गोली चल्यो, भारतीय सेना सन्दीप थापाको मृत्यु
Lamichhane’s supporters continue protest in Chitwan
स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई गाडी चाहिन्छः मुख्यमन्त्री गुरुङ
Govt hell-bent on destroying democracy: Deuba
Dengue yet to be contained in Damak
काखीलाई सफा र गन्धरहित राख्ने सरल उपाए
Veteran actress Subhadra Adhikari no more
Palestinian killed,2Israelis hurt in car attack: Police
Blast at NCP PA member’s house
वरिष्ठ अभिनेत्री सुभद्रा अधिकारी रहिनन्
संस्मरण : मदनमणि युगको अवसान
यस्तो छ शनिबारको मौसम, यी स्थानमा सतर्क रहन आग्रह
चाैध सय उद्योग दर्ता
भारतलाई लाग्यो झट्का, कश्मीरबारे ट्रम्प र इमरानबीच कुराकानी